Labada Shariif oo loo amray inay degdeg u ansixiyaan Dastuurka isku qasan, hadii kale Kiiska lacagaha ay Lunsadeen gacanta loo gelin doono ICC!! Yaa amarkaasi siiyey? Shirar ay la yeelanayaan odoyaasha dhaqanka oo ay bilaabeen... Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Labada Shariif oo loo amray inay degdeg u ansixiyaan Dastuurka isku qasan, hadii kale Kiiska lacagaha ay Lunsadeen gacanta loo gelin doono ICC!! Yaa amarkaasi siiyey? Shirar ay la yeelanayaan odoyaasha dhaqanka oo ay bilaabeen... Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sh Axmed iyo Shariif Xasan Sh Aden ayaa la amray inay si degdeg u dardar geliyaan hawlaha ansixinta dastuurka qabyo qoraalka oo dhowaan loo soo gudbiyey odoyaasha dhaqanka Soomaaliyeed.
Labada Shariif ayaa shirar kala gooni ah la bilaabay odoyaasha beelaha ay kasoo jeedaan iyaga oo ka codsaday in Dastuurka ay ansixiyaan iyaga oo sheegay haddii ay sidaasi dhici weyso inuu jiro qorshe bulshada Caalamku wadato oo la doonayo in Kiiska uu soo bandhigay Bangiga aduunka la horgeyn doono Maxkamada Caalamiga ICC ee Hague.
Madaxweyne Shariif ayaa la sheegay mar uu la kulmayey odoyaasha dhaqanka beesha Hawiye inuu u sheegay in wax faraha ugu jiraahi aysan jirin, xaalkuna xun yahay haddii aan si degdeg ah loo ansixin, isaga oo sheegay inay jiraan Labo qorshe oo ay wadaan bulshada caalamka oo uu sheegay inay kala yihiin;-
1- In Kiiska uu soo bandhigay Bangiga Aduunka ee ku saabsan lacagaha ay lunsadeen Madaxda DKMG ah ee Soomaaliya la bilaabi doono si degdeg hadii qorshaha Road Mabku guul daraysto.
2- Qodobka 2-aad ayuu ku sheegay inuu jiro Plan B ay u ololeynayaan Madaxweynaha maamulka Puntland iyo Dawladda Itoobita, arrintaasi uu ku sheegay haddii ay hirgasho in dhibaato weyn soo foodsaari doonto Beelweynta Hawiye.
Odoyaasha dhaqanka ayaa u sheegay in sidaan ay ku soo socoto Madaxweyne Shariif saansaanteeda ay muuqatay bilihii lasoo dhaafay kadib markii talada dalka iyo hawlaha looga baxay kumeel gaarka uu gacanta u geliyey Amb. Mahiga.
Odoyaasha dhaqanka ayaa ku dhaliilay Madaxweyne Shariif waxa ku qasbay inuu ogolaado wax la yiraahdo Saxiixayaal isaga oo ah Madaxweynaha Soomaaliya, weydiiyeyna sababta uu maqaamkii madaxweynaha uu uga dhigay mid la siman 5 nin oo kale oo loogu yeero saxiixayaal.
Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku calaacalay odoyaasha dhaqanka isaga oo sida la sheegay inay muuqatay inuu ka baqayey inuu xabsi ku muteysto lacago badan oo la lunsaday xiligii uu madaxweynaha ka ahaay Dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa u sheegay odoyaasha dhaqanka Hawiye in Cabdiraxmaan Faroolaha Puntland iyo Shariif Xasan inay meel xun ku wadaan qaranka Soomaaliya.